Ungazakha kanjani izingqikithi zePlasma ngezinyathelo eziyi-8 | Kusuka kuLinux
Ungazakha kanjani izingqikithi zePlasma ngezinyathelo eziyi-8
Isibindi | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Nakhu ukuhunyushwa kwesifundo ukudala izingqikithi zePlasma ngezinyathelo eziyi-8:
Kopisha bese uqamba kabusha ifayela elikhona lePlasma. Igama lefayela lingafana netimu. Izindikimba ezifakiwe ziku- share / apps / desktoptheme / kungaba enkombeni .kde noma umkhombandlela wokufakwa kwakho kwe-KDE. Ungaphinda useshe izingqikithi zePlasma ku- I-KDE-Bheka. Hlela ifayela imethadatha.desktop kumkhombandlela wengqikithi ukufanisa igama lengqikithi. Bheka Ukugcinwa Kwetimu Uma udinga usizo.
Vula ifayela le-SVG elihlotshaniswa ne-Plasma element ongathanda ukuyishintsha kusihleli se-SVG esifana ne-Inkscape noma i-Karbon. Bheka Izici Zetimu Yamanje Uma udinga usizo.
Ifayela ngalinye le-SVG lingaba nezinto eziningi. Shintsha izinto ezikhona noma udale ezizongena esikhundleni sazo. Ama-elementi angaba yi-SVG yakudala noma yeqembu. Note: Ungafaka izithombe ze-bitmap njengezinto ze-SVG uma ukhetha abahleli be-bitmap njenge-GIMP noma i-Krita. Khumbula ukuhlanganisa isithombe ngasinye (inkscape: imiphumela-> izithombe-> ukuhlanganisa zonke izithombe).
Ukushintsha igama lezakhi zendikimba kalula kungenzeka ukuthi kusetshenziswe isandiso se-Inkscape esiku leli kheli
Qiniseka ukuthi i-ID yento ngayinye entsha isethwe kahle. NoteKu-Inkscape ungaqiniseka ukuthi i-ID yento yento ngayinye ilungile ngokuchofoza kwesokudla entweni bese ukhetha Izakhiwo ze-Object.
Faka noma susa noma iyiphi into oyifunayo. Akunandaba ukuthi kubukeka kanjani, kuphela lezo zinto ezine-ID yento eziguqula izinto zesiphakamiso esihle kunazo zonke ezikhona noma cha. Bheka Backgrounds ukuthola incazelo yezinto zesiphakamiso ezitholakalayo.
Phinda izinyathelo 3 - 6 kwesinye isihloko.
Angazi noma ngiyihumushe kahle yini, ngazise noma yini
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ungazakha kanjani izingqikithi zePlasma ngezinyathelo eziyi-8
Iqiniso elithakazelisayo, nokuhalalisela mtanami, ugcine ubhale okuthile.
Yebo-ke uyeke ukubhebhana
Misa ukubhebhana nawe? O cha lokho akukaze
ingabe ikhona noma ayikho inhliziyo? hehehe
Okwenzekayo ukuthi lapha eVenezuela babenohlelo lokuqomisana kanti umjabulisi wabuza lezi zithandani ngaleyo ndlela ukuthi ngabe zihlala ndawonye noma cha
UJamin samuel kusho
Phendula uJamin Samuel
Ngithatha ithuba lokuhlola ukuthi i-ejenti yomsebenzisi ibukeka kanjani kimi 😀 ahaha
kepha angikwazi ukukubeka ku-google chrome; ((fuck)
hahahahaha sebenzisa iChromium, i-Iron, i-Opera, i-Rekonq, i-Firefox, noma yini ngaphandle kwe-Chrome ... HAHA
AJAJAJAJAJAJA .. kahle yini okunye .. Kuzofanele ngihlale ne-chromium .. into exakayo ukuthi ingitshela ubuntu hhayi i-linux mint
I-KZKG ^ Gaara .. Isixazululo senkinga 😉
kahle ngivule i-terminal, ngenza i-Sudo nautilus, yavula iwindi, ngadlula ngandlela-thile ngale ndlela / usr / share / applications / chromium, ngibe sengichofoza kwesokudla kusithonjana se-chromium, ngasinikeza kuzakhiwo ngabe sengiyala, ngathola lokhu / usr / bin / chromium% U .. Ngiyisusile futhi ngakuthayipha ngesandla lokhu:
/ usr / bin / chromium-browser -user-agent = »Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (KHTML, like Gecko) Linux Mint 12 Chromium / 17.0.963.79 Safari / 535.1 ″% U
Ngikwenze ngesandla .. ngoba ukukopisha nokunamathisela bekungalusebenzisi ushintsho, ngakho-ke bekufanele ngilubhalele mina.
Gajim njengeklayenti le-multiprotocol
Sebenzisa isithwebuli senethiwekhi se-MFP